Chelsea Oo Hore U Socodsiineysa Wadahaladii Mushaharka Loogu Kordhinayay Tababare Antonio Conte Xilli La Xaliyay Qilaafkii Jiray - Laacib.net
Chelsea Oo Hore U Socodsiineysa Wadahaladii Mushaharka Loogu Kordhinayay Tababare Antonio Conte Xilli La Xaliyay Qilaafkii Jiray
Chelsea ayaa hore u sii wadeysa wadahalada qandaraaska ee tababare Antonio Conte inkastoo ay xurguf soo kala dhexgashay tababaraha iyo maamulka kooxda oo ku aadan istiraatiijiyadooda suuqa kala iibsiga, sida ay qortay Mail on Sunday.
Maamulka kooxda Chelsea ayaa ka carooday go’aankii uu tababaraha Chelsea fariin qoraaleed ku ogeysiiyay Digeo Costa inuusan qeyb ka aheyn qorshayaashiisa xilli ciyaareedka danbe.
Inkastoo ay taasi jirto, hadana ilo ku sugan kooxda ayaa sheegaya in xaaladaas la xaliyay, iyadoo agaasimaha maamulka Chelsea Marina Granovskaia iyo wakiilka Conte Federico Pastorello ay xiriir joogta ah yeelanayaan halka Conte uu fasax ku maqan yahay.
Chelsea ayaa kalsooni ku qabta in heshiis la gaari doono iyadoo la filayo in mushaharka loo kordhiyo Conte oo haatan sannadkii qaata 5 milyan ginni islamarkaana looga dhigi doono 9 milyan ginni.
Chelsea ayaa u aragta wadahalada qandaraaska inay calaamad u tahay inay taageerayaan tababarahooda, waxaana ay sheegeen in xiddigaha diirada u saaran tababaraha in loo dhaqaaqi doono xilli hore.
Willy Cabellero ayaa la filayaa inuu kooxda ku biiro isbuuca soo socda isagoo keyd u fadhin doona goolhaye Courtois, waxaana ay Juventus wadahadal kula jirtaa kooxda Juventus iyagoo doonaya daafaca garabka ka ciyaara Alex Sandro kaasoo lagu qiimeeyo 55 milyan ginni.
Xaalada Costa ayaa sii adkeysay istaraatiijiyada suuqa kala iibsiga ee kooxda. Kooxaha doonaya ciyaaryahanka ayaa haatan ka warqaba inuu saaran yahay suuqa kala iibsiga iyadoo weli aysan Chelsea bedelkiisa Romelu Lukaku kala soo wareegin Everton.
Conte ayaa sidoo kale jeclaan lahaa inuu dalbado Marco Verratti laakiin xiddiga khadka dhexe oo kala hadlaya PSg mustaqbalkiisa ayay u badan tahay inuu ku biiro Barcelona.